Pollock ezinjalo ezahlukene kuhhavini!
Pollock - ongaphakeme-fat, Ukudla, nenhlanzi ibuthaka, zingase zihlanzwe kalula kusukela amathambo. Inani le-isihlobo izindleko ongaphakeme kanye palatability eliphezulu wayo. Pollock sici ukuthi kulula ukuqonda iphunga futhi ukunambitheka nososo, fast and kahle bona elifakwe futhi enososo. Kungaba kuhle ngokulinganayo sisetshenziswe njengesigungu sokufaka izitsha nsuku zonke futhi ukupheka aphume ke okumnandi gourmet awukudla. Izitsha ethandwa kakhulu zezinhlanzi zasolwandle Pollack in ucwecwe nge imifino ehlukahlukene, isidumbu eyayigcwele Yiqiniso, izingcezu ethosiwe ka tempura. Le nhlanzi uya kalula nanoma yimuphi sauce uhlobise ngokushesha esilaphekayo futhi akanawo amathambo amancane. Cabanga ongakhetha kanjani ukuba abhake Pollock kuhhavini.
ukhilimu Pollack nge dill
Ukulungisa alube izinhlanzi isidingo:
Pollock uginindela - 500 g;
dill - 200;
Ubhontshisi - 500 g;
Ngaphambi Pollock nezitini kuhhavini, kufanele marinate ngendlela ekhethekile sauce alube. Sauce okulungiselelwe Ukushisa lokushisa 80 degrees izithako ezilandelayo:
2 izinkomishi amafutha inkomo ukhilimu;
bay amaqabunga ambalwa ezinkulu uphizi omnyama allspice;
3 wezipuni kafulawa sifted;
2 fresh inkukhu neqanda isikhuphasha (okungcono ukuthatha amaqanda ngomzana, ngoba aqukethe umsoco omningi).
1. Le nhlanzi incibilikiswa, ezaziqoshwe obliquely futhi ngosawoti, bese bacwilisa Pollock imizuzu engamashumi amane endaweni okunamafutha kakhulu, ukulungele ngokukhethekile cream sauce.
2. Bow oqoshiwe ngesimo izindandatho, garlic triturated esigqulweni ngosawoti kanye dill.
3. Ngo-ucwecwe ukudla ukusakaza kancane ubhontshisi oluhlaza, ucezu ofakwe inhlanzi, anyanisi kanye dill, garlic kanye nosawoti. Zonke uvalwe zihambisana futhi avaliwe futhi ithunyelwa broiler. Pollock kule ucwecwe kumelwe ulungiselele ngokwesilinganiso amaminithi ngamashumi ayisihlanu. Amazinga e iKhabhinethi kuhhavini zigcinwe ngaso degrees kungathi izingalo ezingamakhulu amabili
4. Phakathi nesikhathi sokulungiselela Pollock kuhhavini, kabili kususwe futhi kancane ukuvula ucwecwe, uthele ukhilimu sauce, okuyinto sathi ciki nezibopho. Khonza kufanele sibe ku-ebanzi isidlo flat, ukhilimu ngobuningi ukuthambisa.
Nokho, izinhlanzi zingenziwa ethakazelisa kakhulu. samaholide kakhulu, isibonelo, ibukeke imiqulu zezinhlanzi kubhakwe kuhlanganiswe nanoma izinongo kanye nemifino. Ukudidiyela lesi sabelomali isidlo kusukela umucu efanayo ofakwe ukhilimu. Nokho, it is hhayi zihambisana ucwecwe okuphekiwe ngesimo imiqulu. Njengoba toppings eluhlangotsini Pollock ukusakaza isiqeshana ezondile ushizi kanzima, ugarliki kanti ezinye, yebo, fennel noma ezinye amakhambi enamakha fresh. Fish imiqulu ngemva alo skewers kuvikelwe (lapho abapheki ngubani bopha nabo ungqimba ezondile ubhekeni) futhi ethosiwe noma ephekwe Bokubhaka njalo sishaye izingxenye ezincane sauce.
Ikakhulukazi izitsha athandwayo kusukela zokupheka Pollock ezifaka notamatisi. Ngokwesibonelo, e emadolobheni asogwini usizi eside izinhlanzi endaweni cauldron thick-ngodonga e utamatisi sauce esasihambisana omkhulu utamatisi fresh no-anyanisi. Senkosikazi yazo Pollock ngakho eside igcinwe emlilweni, ngaso ukuba amathambo akhe zithambile kakhulu futhi esihlwabusayo. Lokhu dish iyajabula ukudla hhayi kuphela izingane yezakhamuzi zendawo, kodwa futhi izivakashi baqaphe.
Pollock kuhhavini kungabuye kwenziwe a sauce iwayini, lezi izindlela zingatholakala ngobuningi, isibonelo, i-cuisine isiFulentshi, iSpanishi futhi Italy. Ngokuvamile, le nhlanzi ngenkuthalo esetshenziswa cuisine European futhi Russian. Eminyakeni yamuva, kungabonwa ngisho amatafula emazweni asempumalanga. Ngenxa ukwakheka olinganiselayo izitsha ezivela zokupheka Pollock zazo uya eba bendabuko futhi othandekayo abasemikhayeni yasekhaya, ziwusizo kakhulu kokubili abadala nezingane ngokufanayo.
Odokotela ikakhulukazi ohlonishwayo izinhlanzi, ngoba iqukethe inqwaba izinto ezibalulekile mayelana nomzimba womuntu, ukusetshenziswa kwalo ehlelekile kunomphumela omuhle ubuchopho, inhliziyo, imithambo yegazi kanye neminye ebalulekile sitho izinhlelo.
Izithelo pilaf: iresiphi for the izinyo elimnandi, hhayi kuphela
I apheke ekhaya. Recipe of inyama in sauce sweet and omuncu
Forensic ngihlolwa ingqondo
I-Technogenic catastrophe. Isiqalo sethonya lomuntu ngemiphumela ebuhlungu
Gel nail sula: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Isimo esingavamile futhi eyingqayizivele Russia
Yini Kuyothatha ukwahlukanisa umsindo imoto indlela yokukwenza